McKnight Oo Loo Magacaabay Libby Larsen Sida Loogu Sameeyo Artist
Sawir: Ann Marsden
Machadka McKnight Foundation wuxuu magacawday abaalmarinta abaal-marinta Minnesota ee abaal-marinta iyo diiwaangeliyaha farshaxanka Libby Larsen oo ah 2016-ka McKnight. Hada sannadka 19aad, sharaf sanadeedka waxaa ka mid ah $ 50,000 abaal-marin lacageed oo aqoonsanaya fannaaniinta Minnesota ee shakhsiyaadka ka dhigay kaalin muhiim ah tayada nolosha dhaqanka gobolka.
"Intii lagu gudajiray xirfadda, Libby Larsen wuxuu ahaa muxaadaro asal ah oo cusub oo muusikada cusub iyo udoodhawrka loo yaqaan 'jiilka xiga'," ayuu yiri madaxweynaha McKnight Kate Wolford. "Larsen waxaa loo aqoonsan yahay adduunka oo dhan si loogu noolaado nolol cusub oo loogu talagalay qurxinta muusikada, iyo dhagaystayaashu waxay u dhow yihiin guriga in ay ogaadaan in aragtida farshaxanku ay sidoo kale u dhiganto ruux maskax leh. Iyadoo uu yahay asaasaha Abaalmarinta Waalidiinta Maraykanka, waxay ka caawisay inay sameyso xarun qaran oo loogu talagalay muusikada cusub ee muusikada cusub.
Larsen, oo 65 jir ah, ayaa ka soo qaybgalay wax ka badan 500 oo shaqooyin waaweyn, oo ka soo jeeda hawlo farsamo oo waaweyn iyo hawlgal orchestral ah, oo loo qaybiyay qaybaha muusiga iyo qolka heesaha. Haweeneydii ugu horreysey ee ku noolayd gurigeeda oo leh orchestra weyn, Larsen oo loo tababaray Jaamacadda Minnesota ayaa waxaa ka soo qaybgalay hogaamiyaha muusikada Dominick Argento, McKnight oo ah fanaankii ugu horeeyay ee 1998-kii. Biyaha Biyaha (1985) iyo Minnesota Orchestra oo hoos imaanaya jihada Sir Neville Marriner. Larsen oo muddo dheer shaqeynayay muddo afar sano ah, ayaa Larsen waxaay dhistay muusig iyo muqaal duubis oo muusikada ah oo aan si gaar ah loola xiriirin, lakala soo bandhigay tixraacyo isku dhafan iyo tixraac ku saabsan waxyaabo ay ka mid yihin dadyowga Maraykanka, Mary Shelley Frankenstein, Lionel Hampton's marimba. Larsen waxaa sidoo kale loo yaqaanaa wada shaqeeyn fara badan oo ay ka mid yihiin James Dunham, Frederica von Stade, King's Singers, iyo Apollo Chamber Players.
Larsen ayaa sidoo kale furay albaab cusub oo loogu talagalay jilayaasha cusub ee kala duwan ee qoraallada Minnesota Composers Forum, oo ay la wadaagto Stephen Paulus dabayaaqadii 1973-kii. Hadda waxaa loo yaqaan 'Composers Forum Compatriates , ururku wuxuu ka kobciyay qorshe horumarineed oo gobolka ah mid ka mid ah hay'adaha adeegga kombuyuutarrada ee ugu sarreeya, oo leh barnaamijyo taageera oo isku xira muusikada iyo jaaliyadaha ku yaalla dhammaan 50 dawladood. "Marwalba waxa ay ahayd mid cajiib ah in la ilaaliyo Libby, oo ah taageere gebi ahaan taageersan iyo wada shaqeyn," ayuu yiri Dale Warland, 2001-dii McKnight Aamiin oo ah muxuu ka mid yahay guddiga xulashada. "Inkasta oo ay jirto xaalad caalami ah oo adduunka ah, iyo haddii ay soo bandhigayso hadal ama tababar wax ku ool ah, waxay diiradda saareysaa had iyo jeer muusikada kale iyo shaqadooda."
Gabdhaha Larsen (24-kii December, 1950-kii) waxaa lagu dhajiyay dhaqdhaqaaqyo badan oo muusikada ah, laga soo bilaabo diiwaanka boogie-woogie hooyadeed waxay ku ciyaaraysay qoyskii jilicsanaanta, jacaylka jasiiradda Dixieland iyada oo aabaheed ee jilaaga caanka ah, ee Gregorian farriinta ay ka baratay raga ee Masiixa King's School. Tirinta Hector Berlioz, James Brown, Big Mama Thornton, iyo JS Bach oo ka mid ah saamaynteeda badan, Larsen ayaa sheegtay in ay ku soo gashay iyada oo aan lahayn khadad qadar ah, iyada oo loo marayo mitir caadi ah kaliya ka dib markii ay ogaatay qulqulka dabiiciga ah ee khadka muusikada. Iyada oo ay soo uruurisay ballanqaadyo fara badan oo ka mid ah qoraallada iyo heesaha dhawaaqa ah ee ay qoraan qoraallada James Joyce iyo Calamity Jane ilaa Katherine ee Aragon, USA Maanta wuxuu ugu yeeray "heesaha kaliya ee Ingiriisiga ku hadla tan iyo Benjamin Britten oo aayado cajiib leh ku dhexmuuqda muusikada quruxda badan si caqligal ah iyo ficil ahaanba.
Ku guuleystey abaalmarin Grammy 1993, oo leh in ka badan 50 CD oo ka mid ah shaqadeeda diiwaangelinta, Larsen ayaa lagu amaanay "muusigga oo farshaxan farshaxan ku sameeyay qoraallo badan"Gramophone) oo leh "dhar cad, si sahal ah u naaqusay sawirada iyo riwaayadaha jilicsan" (Philadelphia Inquirer). Larsen waa abaalmarinta abaalmarino badan oo farshaxanimo oo heer qaran ah iyo shahaadooyin sharafeed oo ay ka mid yihiin "George Peabody Medal" oo loogu talagalay Muusikada Muusikada ee Maraykanka (2010), Eugene McDermott Awarded ee Farshaxanka ee Machadka Teknoolajiyada Massachusetts (2003), iyo Abaalmarinta Lifetime Achievement Awards Akademiyada Mareykanka ee Farshaxanka iyo Warqadaha. Larsen waxa kale oo uu ka soo noqday Xarunta Harrisios Papamarkou ee Waxbarashada Maktabada Golaha (2003-2004), waxaa la siiyay Abaalmarinta Aasaasayaasha Machadka Michael Chorus Michael Korn ee Horumarinta Farshaxanka Xirfadlayaasha Farsamada (2005), waxaana loo soo galiyay Minnesota Music Hall of Fame (2007). Iminka agaasimaha farshaxanka ee Machadka Farshaxanka Faransiiska ee John Duffy ee Opera New, Larsen wuxuu ku nool yahay Minneapolis iyada oo ninkeeda, James Reece.
Abaalmarinta Farshaxan ee Muhiimka ah wuxuu aqoonsadaa farshaxanada doortay inay noloshooda iyo xirfadahooda ka dhigtaan Minnesota, taas oo ka dhigeysa in gobolkayaga meel hodan ku ah dhaqanka. Inkasta oo ay heystaan tayada iyo fursadda ay ugu sii wadi lahaayeen shaqadooda meelo kale, farshaxanadani waxay doorteen in ay joogaan - oo ay joogaan, waxay sameeyeen isbeddel. Waxay aasaaseen oo ay xoojiyeen ururada farshaxanka, dhiirigaliyay farshaxanno yaryar, iyo soo jiidasho iyo dhagaystayaal. Waxaa ugu fiicnaa dhamaantood, waxay sameeyeen wax cajiib ah, feker ah oo fekeraya. Himilada McKnight maalkii farshaxanku waa in lagu taageero fannaaniinta shaqeeya ee abuura oo wax ku biiriya bulshooyinka firfircoon. Barnaamijka waxaa lagu aasaasay iyadoo la aaminsan yahay in Minnesota ay horumarinayso marka ay farshaxannadu sii fiicnaato. Abaalmarinta Farshaxanka, oo la yimaada $ 50,000, waxay tagtaa hal sanaaal Minnesota ah.
Machadka McKnight wuxuu doonayaa inuu hagaajiyo tayada nolosha ee jiilalka hadda iyo mustaqbalka. Waxaa la aasaasay sannadkii 1953, waxaana madaxbannaanay William iyo Maude McKnight, oo ah hay'ad Minnesota ku salaysan oo hanti ku dhow qiyaastii $ 2.2 bilyan oo lagu siiyay $ 88 milyan sannadka 2015. Intaas oo dhan, in ka badan $ 9 milyan oo doolar ayaa udubdhexaadiyay fanaaniinta shaqada si loo abuuro loona hormariyo bulshooyinka firfircoon .
Na Eng, Agaasimaha Isgaarsiinta, (612) 333-4220